China Sodium Bromide rụpụta na ụlọ ọrụ | Ntinye
Aha Bekee: Sodium Bromide
Aha ndị ọzọ: Sodium Bromide, Bromide, NaBr
Usoro kemịkal: NaBr
Molekụla arọ: 102.89
Nọmba CAS: 7647-15-6
EINECS nọmba: 231-599-9
Mmiri mmiri: 121g / 100ml / (100℃), 90.5g / 100ml (20℃) 
S Usoro: 2827510000
Isi ọdịnaya: 45% mmiri mmiri; 98-99% siri ike
Ọdịdị: White crystal powder
Typedị azụmahịa: Emeputa / Manuflọ ọrụ na &lọ Ahịa
Main Product: Magnesium Chloride Calcium chloride, Barium chloride,
Number nke n'ọrụ: 150
Afọ nke nkwenye: 2006
Asambodo Sistemụ Njikwa: ISO 9001
Ọnọdụ: Shandong, China (Chile)
Mmiri mmiri: 121g / 100ml / (100 ℃), 90.5g / 100ml (20 ℃) ​​
HS Usoro: 2827510000
Anụ ahụ na kemịkalụ
Njirimara nke anu aru
1) Njirimara: cubic crystal ma ọ bụ ọcha granular powder.It bụ ísì ụtọ, nnu na ubé ilu.
2) Njupụta (g / mL, 25 Celsius C): 3.203;
3) Ebe mgbaze (℃): 755;
4) Ebe isi mmiri (Celsius C, nrụgide nke ikuku): 1390;
5) Ntughari ntughari: 1.6412;
6) Ihe ngosi Flash (Celsius C): 1390
7) Solubility: ọ na-adị mfe soluble na mmiri (solubility bụ 90.5g / 100ml mmiri na 20 Celsius C, solubility bụ 121g / 100ml mmiri na 100 Celsius C), ihe ngwọta mmiri bụ nnọpụiche na conductive. acetonitrile, acetic acid.
8) Ike ikuku mmiri (806 ° C): 1mmHg.
1) Anhydrous sodium bromide crystals precipitate in the sodium bromide solution at 51 ℃, na mmiri dihydrate guzobere mgbe ọnọdụ okpomọkụ dị ala karịa 51 ℃.
2) Sodium bromide nwere ike iji chlorine gas dochie ya iji nye bromine.
2Br- + Cl2 = Br2 + 2 Nke abụọ
3) Sodium bromide na - eme ka sulfuric acid dị elu iji mepụta bromine, ya bụ, n’okpuru ihe siri ike nke acid acid, sodium bromide nwere ike ịgbanye na enweghị bromine
2NaBr + 3H2SO4 (lekwasị) = 2NaHSO4 + Br2 + SO2 ↑ + 2H2O
4) Sodium bromide nwere ike imeghari na itughari sulfuric acid iji mepụta hydrogen bromide.
5) na okenye mmiri, sodium bromide nwere ike meghachi omume na ọlaọcha ion na-etolite ìhè odo siri ike ọlaọcha bromide.
Br - + Ag + = AgBr hapụrụ
6) Electrolysis nke sodium bromide na nchara awuru iji mepụta bromine gas na sodium metal.
2 nyere nabr = 2 na + Br2
7) Ngwọta mmiri sodium bromide nwere ike ịmepụta sodium bromate na hydrogen site na electrolysis.
NaBr + 3H2O = electrolytic NaBrO3 + 3H2 ↑
8) Mmeghachi omume okike nwere ike ịpụta, dịka mmeghachi omume isi iji mee bromoethane:
Sodium Bromide nkọwa:
Clear, colorless ka icha mmirimmiri edo edo
Nnwale (dika NaBr)%
Nnwale (dika NaBr)% ≥
Ogo nke nwepu
Chloride (dika CL)%≤
Sulfates (dika SO4)%≤
Bromates (dika BrO3)%≤
PH (10% ngwọta na 25 ogo C)
Duru (dị ka Pb)%≤
Iodide (dị ka m)%≤
1) Usoro mmeputa
A na-etinye brom na-adịkarị ntakịrị na ngwọta sodium hydroxide nke mejupụtara iji mepụta ngwakọta nke bromide na bromate:
A na-agwakọta ngwakọta ahụ ka ọ kọọ, a na-agwakọta ihe fọdụrụnụ na toner ma kpoo ya iji belata bromate ka bromide:
NaBrO3 = NaBr + 3 c + 3 ngalaba dee
N'ikpeazụ, a na-agbaze ya na mmiri, wee kpochaa ma kpochaa ya, ma kpoo ya na 110 ruo 130 Celsius.
* Usoro a bụ usoro izugbe bromide site na bromine na iji ya eme ihe na ụlọ ọrụ.
2) Usoro nnọpụiche
Jiri sodium bicarbonate dị ka akụrụngwa: igbari sodium bicarbonate na mmiri wee wepụ ya na 35% -40% hydrobromide iji nweta sodium bromide solution, nke a tụkọtara ma mee ka ọ dị mma iji kpoo sodium bromide dihydrate. Mmiri, gbanye mmiri bromine ruo mgbe agba bromine gosipụtara naanị. Heat, mee ka ihe dị mma na mmiri hydrogen sulfide wee maa mma, wee weta obụpde. N'elu mmiri dị elu, mmiri na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, na mgbe ihicha, a na-ebufe ya na draya na nọ na 110 maka elekere 1. Mgbe ahụ, a ga-eme ka ọ dị jụụ na draịva calcium chromide iji nweta sodium bromide anhydrous (reagent ọkwa).
Usoro mmeghachi omume: HBr + NAHCO ₃ → NaBr + CO2 ↑ + H2O
Na 40% alkali mmiri mmiri dị ka akụrụngwa: tinye hydrobromide acid n'ime ite mmeghachi omume, na-akpali akpali mgbe niile, jiri nwayọọ nwayọọ tinye 40% mmiri alkali ngwọta, neutralize na pH7.5 - 8.0, meghachi omume na-emepụta sodium bromide solution.The sodium bromide solution bụ a na-agbanye ya ma kpochaa n'ime sodium bromide solution tank tank, wee banye na ntinye mmiri, na-enye nri ugboro 1-2, na ike ndọda nke 1. 55 Celsius ma ọ bụ nke ọzọ, na-eme ka filtration filtration, na-etinye ya na nchekwa sodium bromide liquid tank tank. .Mgbe ahụ, pịa n'ime crystallization tank, na-akpali akpali jụrụ crystallization, na mgbe ahụ na crystallization nke centrifugal nkewa, okokụre product.The nne mmanya na-laghachi ka itughari sodium bromide mmiri mmiri nchekwa tank.
Mmeghachi omume ụkpụrụ: HBr + NaOH → NaBr + H2O
3) Urea Mbelata usoro:
Na alkali tank, soda na-agbaze na mmiri ọkụ na ọnọdụ okpomọkụ nke 50-60 Celsius C, na mgbe ahụ urea
agbakwunye na igbari 21 Celsius Bụrụ ihe ngwọta. wee banye na ite mbelata mmeghachi omume, jiri nwayọ site na bromine, chịkwaa ọnọdụ mmeghachi omume nke 75-85 Celsius C, na pH nke 6-7, ya bụ, iru njedebe nke mmeghachi omume, kwụsị bromine na edemede, nweta sodium bromide ngwọta.
Gbanwee pH na 2 na hydrobromic acid, wee gbanwee pH ka 6-7 jiri urea na sodium hydroxide wepu bromate.The ngwọta na-ewe iwe na obụpde na agbakwunye ihe ngwọta nke barium bromide agbakwunyere na pH6 - 7 iji wepu sulfate .Ọ bụrụ na nnu nke barium bu oke, a ga - atụnye sọlfọ sulphuric ka wepụkwa ya. Mgbe emechara ihe ngwọta ahụ, a na-ehichapụ ya, na-eme ka ọ dị elu na nrụgide nke ikuku, na ihe ndị dị n'etiti jupụtara n'ọtụtụ oge. Kwụsị nri maka awa 2 tupu crystallization.Adjust pH to 6-7 1 hour tupu crystallization.The sodium bromide dị iche iche wee kpoo na rotary drum draya.
Ofkpụrụ nke mmeghachi omume: 3Br2 + 3Na2CO3 + NH2ConH2 = 6NaBr + 4CO2 ↑ + N2 ↑ + 2H2O
1) Mmetụta ụlọ ọrụ maka nkwadebe nke ihe nkiri sensitizer.
2) na ọgwụ maka mmepụta nke diuretics na sedatives, eji maka ọgwụgwọ neurasthenia, ehighị ụra nke na-adịghị ahụkebe, obi ụtọ nke uche, wdg. A na-eji ya iji belata nrụgide ọkụkọ site na ihe dịka ịnyefe ìgwè atụrụ, ịakingụ beaking, ọgwụ ọgwụ, ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, njide, nchịkọta ọbara ma ọ bụ nsị ọgwụ.
3) Ejiri maka imepụta ngwa nri sịntetik na ụlọ ọrụ na-esi isi.
4) eji dị ka brominating gị n'ụlọnga na-ebi akwụkwọ na dyeing ụlọ ọrụ.
5) A na-ejikwa ya maka mkpebi nke cadmium, nkwadebe maka nchacha maka ngwa ngwa akụrụngwa, imepụta bromide, njikọta ihe, efere foto na ihe ndị ọzọ.
Flowchart nke Sodium Sulfite
1) Eji mee ihe iji chọpụta nyocha na mkpebi siri ike nke tellurium na niobium na nkwadebe nke onye nrụpụta ihe ngwọta, jikwa ya dịka mbenata ndị ọrụ;
2) Ji dị ka mmadụ mere eriri stabilizer, ákwà bleaching gị n'ụlọnga, foto Mmepụta, dyeing na bleaching deoxidizer, ekpomeekpo na dai na-ebelata gị n'ụlọnga, akwụkwọ lignin remover, wdg
3) Jiri dị ka a nkịtị gbasara nyocha reagent na photosensitive resistor ihe;
4) Ihe na-egbu egbu na-egbu egbu, nke nwere mmetụta nchapu na nri na mmetụta mgbochi siri ike na oxidase na nri osisi.
5) Mbipụta na ụlọ ọrụ dye dị ka deoxidizer na ịcha ọcha, nke eji esi nri nke akwa akwa dị iche iche, nwere ike igbochi ọxịdashọn nke eriri ala na-emetụta ike eriri, ma melite ịdị ọcha nke ihe eji esi nri. Ụlọ ọrụ foto na-eji ya dị ka onye Mmepụta.
6) Ndị ụlọ ọrụ textile na-eji ya eme ihe maka ihe eji eme mmadụ.
7) The electronic ụlọ ọrụ na-eji mee photosensitive resistors.
8) treatmentlọ ọrụ na-ahụ maka mmiri maka ịkpụpụta mmiri mmiri, ị drinkingụ mmiri ọ drinkingụ ;ụ;
9) Ejiri ya dị ka ịcha ọcha, ihe nchekwa, ihe na-atọ ụtọ na antioxidant na ụlọ ọrụ nri.Ọ na-ejikwa ya na njikọ ọgwụ na dịka onye na-ebelata ihe na-emepụta nri nke akwụkwọ nri.
10) A na-eji ya maka imepụta cellulose sulfite ester, sodium thiosulfate, kemịkalụ organic, akwa ọcha, wdg.
11) A na-eji ụlọ nyocha iji kwadebe sọlfọ dioxide
Isi Export Ahịa
North America Central / South America
Nkọwa nkọwa zuru ezu: 25KG, 50KG; 500KG; 1000KG ， 1250KG Jumbo Bag;
Nkwakọ ngwaahịa: Jumbo bag size: 95 * 95 * 125-110 * 110 * 130 ；
25kg akpa akpa: 50 * 80-55 * 85
Obere akpa bụ akpa nwere okpukpu abụọ, na akwa oyi akwa nwere ihe nkiri mkpuchi, nke nwere ike igbochi nkwụsị mmiri. Akpa Jumbo na-agbakwunye mgbakwunye nchebe UV, nke kwesịrị ekwesị maka njem njem ogologo oge, yana yana ọtụtụ ugwu.
Kwụ ụgwọ & Mbupu
Mentkwụ Tergwọ Okwu: TT, LC ma ọ bụ site na mkpakorita
Port nke Loading: Qingdao Port, China
Ebute oge: 10-30days mgbe ị kwadoro iwu ahụ
Uru Uru Asọmpi
Obere Oders Nabatara Ihe Nlereanya Dị
Ekesa nsụgharị na-ebugharị
Ọnụahịa bara uru na mbufe
Nkwado / akwụkwọ ikike mba ụwa
Mba nke Si Malite, CO / Adị A / Edị E / Fdị F ...
Nwee ihe karịrị afọ 15 ọkachamara na mmepụta nke Sodiium Bromide;
Nwere ike hazie mbukota dị ka gị chọrọ; Ihe nchekwa nke akpa jumbo bụ 5: 1;
Obere ikpe iji na-anabata, free sample dị;
Nye ezi uche ahịa nyocha na ngwaahịa ngwọta;
Iji nye ndị ahịa ọnụahịa kachasị asọmpi n'oge ọ bụla;
Ọnụ ego na-akwụ ụgwọ dị ala n'ihi uru akụ na ụba dị ala yana ụgwọ njem dị ala
n'ihi ịbịaru nso n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ, hụ na ọnụahịa asọmpi.
Transportgbọ njem nchekwa
1. Ekwesiri ịchekwa ya na ebe akọrọ, jụụ ma dị mma nke ọma, iji gbochie anwụ, na ọkụ na ikewapụ iche, ọ bụghị site na amonia, oxygen, phosphorus, antimony powder na alkali na nchekwa na njem niile. a ga-edepụtakwa okporo ọka iji gbochie ire ọkụ.
2. Ọ bụrụ na ọkụ, aja na carbon dioxide fire extinguishers nwere ike iji gbanyụọ ọkụ.
Nke gara aga: Sulfite Sodium
Osote: Sodium Hydrosulfite
Calcium Bromide mmiri mmiri
Calcium Bromide Ngwọta
Calcium Bromide mmiri mmiri, Hydrosulfite De Sodium, Calcium Bromide Ngwọta, Calcium Bromide Anhydrous, Hydrosulfite, Natrium Hydrosulfite,